Xarelto के हो र यो केको लागि प्रयोग भएको छ? | एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण स्वास्थ्य कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन चेकआउट समाचार कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि बनाम मित्र घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि जानकारी >> Xarelto के हो?
तपाइँलाई रोक्न एक पोस्ट सर्जिकल औषधि आवश्यक छ कि छैनरगत थप्नेवा जोखिम कम गर्न को कारणएट्रियल फाइब्रिलेशन,Xareltoएक आम औषधि एक को रूप मा प्रयोग गरीन्छanticoagulant। रगत पातलो सीधा मौखिकanticoagulantकम गर्दछरगतको थक्काको जोखिमकोरोनरी धमनी रोग सहित र विभिन्न जटिलताहरूका कारणपल्मोनरी एम्बोलिजम।
थप जानकारी पाउन कृपया तल पढ्नुहोस्Xarelto, यसको डोज रसाइड इफेक्ट, र यो कसरी मार्केटमा अन्य रगत पातलो औषधिहरूसँग तुलना गर्दछ।
के होXarelto, र यो केको लागि प्रयोग भएको छ?
Xarelto पछिल्लो मध्ये एक होब्रान्ड नामबढ्दो सूचीमा सामेल हुन औषधिहरूanticoagulantलागूपदार्थ।Xareltoरोक्नको लागि उत्तम प्रयोग गरिन्छथप्पडहृदय र सम्बन्धितरक्त वाहिनीसर्तहरू।स्वास्थ्य सेवादेश भरका पेशेवरहरूले यसलाई भन्दा बढी निर्धारित गरेका छन् Million करोड पटक जो औषधि कम गर्न को लागीरगत कोटजोखिम
Xareltoको रूपमा पनि चिनिन्छ rivaroxaban , र औषधि को कुनै जेनेरिक संस्करण छैन।Rivaroxabanएक होपहिल्यै पहिल्यै अवरोधर एक रूपमा वर्गीकृत गरिएको छanticoagulant। औषधि Janssen फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित हो र एक प्रिस्क्रिप्शन मात्र औषधि हो।
यसले विभिन्न हृदय र लाभ भएका मानिसहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछरक्त वाहिनीसर्तहरू, सहित:
एट्रियल फाइब्रिलेशनवाअनियमित मुटुको धड्कन
गहिरो नसा थ्रोम्बोसिस(सामान्य जोखिम पोष्ट-हिप रघुँडा प्रतिस्थापन सर्जरी)
शल्य / गैर शल्य अस्पताल अस्पतालमा
बिभिन्न अवस्थाले बिरामीहरूलाई जोखिममा राख्छरगत जमाउनेबाट,एट्रियल फाइब्रिलेशनकेहि शल्यक्रिया गर्न।एन्टिकोआगुलेन्टजोखिम कम गर्न औषधीहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। निम्नचिकित्सा अवस्थासामान्यतया यसको लागि उपचार गरिन्छरगत जमाउनेप्रयोग गर्दैanticoagulantजस्तैXarelto:
गहिरो नसा थ्रोम्बोसिस
TOरगत कोटएक गहिरो नसका कारणहरूमा गठनगहिरो रक्त थ्रोम्बोसिस(डीवीटी), सामान्यतया खुट्टा वा श्रोणिमा। का लागि जोखिम कारकडीवीटीसमावेश :
भंग वा मांसपेशिमा चोटपटक शिरा सम्मिलित
प्रमुख शल्यक्रिया (विशेष गरी घुँडा /हिप प्रतिस्थापन सर्जरी)
ढिलो रगत प्रवाह
एस्ट्रोजेन स्तर बढ्यो
मुटु / फोक्सोको रोग
यदि उपचार नगरी छोडियो भने,डीवीटीअशक्तता, गम्भीर बिरामीहरू र गम्भीर अवस्थामा मृत्यु हुन सक्छ।स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूले सल्लाह दिन्छन्Xareltoमा रहेका बिरामीहरूलाईउच्च जोखिमविकासको लागिडीवीटी।Xareltoरगत पातलो पार्छ, नसा मार्फत राम्रो प्रवाह पैदा गर्दछ।
जब एकडीवीटीरगतको माध्यमबाट र फोक्सोमा यात्रा गर्दछ, अवरोध एक पल्मोनरी एम्बोलिजम (PE) हुन्छ।XareltoPE हरू लाई रोक्न र उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सामान्य रूपमा AFib को रूपमा चिनिन्छ, एट्रियल फाइब्रिलेशन सबैभन्दा उपचारित मध्ये एक होअनियमित मुटुको धड्कनसर्तहरू। AFib संग एक व्यक्ति को हृदयको माथिल्लो कोठामा अनियमित पिटिएको छ, उचित रगत प्रवाह को एक अभाव को कारण।
AFib भएका बिरामीहरूलाई बढी जोखिम हुन्छरगत थप्नेकिनभने र हृदयबाट कमजोर रगत प्रवाहको कारण। जोखिम कम गर्न डाक्टरहरूले तोक्नेछन्रगत पातलोजस्तैXareltoAFib संग ती गर्नेहरूलाई।
शल्य चिकित्सा पछि
केहि सर्जरीहरू जस्तै घुँडा रहिप प्रतिस्थापनपोस्ट-सर्जिकलको साथ आउनुहोस्रगतको थक्काको जोखिम। डाक्टरहरूले लेख्न सक्छन्Xareltoशल्यक्रिया पछि महत्त्वपूर्ण जटिलताहरू रोक्नको लागि।
Xarelto(rivaroxaban) ढिलो हुन्छरगत जमाउनेएक विशिष्ट रोक्दैथप्पडXa भनिने कारक। सामान्यतया, Xa को सक्रियता अन्तत: सिर्जना गरिएको कास्केडको अंश होरगत थप्ने।Rivaroxabanएक एजेन्ट हो जसले Xa कारकको सक्रियतालाई रोक्नको लागि काम गर्दछ, अन्ततः रगतबाटथप्पड।
को खुराक मजबूत छrivaroxaban, अधिक निषेध यो Xa कारक मा छ। बढेको खुराक अन्तत: Xa कारकको उत्पादनलाई मद्दत गर्ने क्षमतालाई रोक्दछथप्पड।
Xareltoट्याब्लेट फारममा उपलब्ध छ र यसको उपचार र गम्भीरतामा निर्भर गर्दै खुराकहरू भिन्न हुन्छन्थप्पडजोखिम आवश्यकतामा निर्भर गर्दै,Xareltoट्याब्लेट चार शक्तिहरुमा आउँछ:
२. mg मिलीग्राम
१ mg मिलीग्राम
औषधीले पहिलो खुराक लिएको केहि घण्टामा रगत पातलो हुन थाल्छ। यदि बिरामीले यो लिन छाड्यो,Xarelto२ 24 घण्टा भित्रमा लगाउनेछ। डाक्टर आदेश र दिईएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्Xareltoकसरी औषधि लिने मा।
निम्न तालिकाले विभिन्न सर्तहरूको लागि तोकिएको मानक खुराकहरूको रूपरेखा दिन्छ:
सर्त Xarelto खुराक (मिलीग्राम) फ्रिक्वेन्सी
AFib १-20-२० मिलीग्राम दिनमा एक पटक (खाना सहित)
डीवीटी/ पीई उपचार १-20-२० मिलीग्राम १ mg मिलीग्राम २१ दिनमा खानाको साथ दिनमा दुई पटक, र त्यसपछि २० मिलीग्राम खानाको साथ दिनमा एक पटक
डीवीटी/ पीई जोखिम न्यूनीकरण १० मिलीग्राम दिनमा एकपटक
कोरोनरी / पल्मोनरी धमनी रोग २. mg मिलीग्राम दिनमा दुई पटक, एस्पिरिनसँगै
पछिXareltoसामान्यतया दिनमा एक वा दुई चोटि लिन्छ, यो हरेक दिन लिन सुरक्षित छ जबसम्म अन्यथा भनिदैनस्वास्थ्य सेवाप्रदायकले गोली लिईरहेको छ।
यदि तपाईंलाई गोली निलउने समस्या छ भने, तपाईं कुचल्न सक्नुहुन्छXareltoट्याब्लेटहरू र तिनीहरूलाई कोमल खानेकुराको साथ मिक्स गर्नुहोस्, सफा गर्नुहोस्, जस्तै तुरुन्त प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले। यद्यपि यो उत्तम हो यदि तपाईले आवश्यक अनुसार यो गर्नुभयो भने। यदि सम्भव छ भने, गोलीलाई पूरै निल्नुहोस्।
कम खुराक (२. and र १० मिलीग्राम)Xareltoखानेकुराको वास्ता नगरी लिन सकिन्छ, तर यदि सम्भव भएमा खानाको साथ प्राय: सिफारिस गरिन्छ। यदि प्रिस्क्रिप्शन प्रत्येक दिन एउटा गोलीको लागि हो भने, यसलाई डिनरको साथ लिन सिफारिस गरिन्छ। यदि दिनमा दुई पटक लिन्छ भने, डाक्टरहरूले यसलाई बिहानको खाजा र सँगै लिने सल्लाह दिन्छन्साँझको खाना।
यदि तपाईंले एक खुराक याद गर्नुभयो भनेXareltoर १ mg मिलीग्राम दुई पटक दैनिक आहार लिईरहेको छ, mg० मिलीग्राम खपत भएको सुनिश्चित गर्न एकै दिनमा तपाईले बिर्सनु भएको डोज लिनुहोस्। यदि तपाइँले एक खुराक याद गर्नुभयो र २. mg मिलीग्राम दैनिक दुई पटक लिनु भएको छ भने, छुटेको खुराक छोड्नुहोस् र अर्को निर्धारित समयमै खुराक पुनः सुरु गर्नुहोस्। एकचोटि दैनिक Xarelto को अन्य प्रणालीहरूको लागि, छिटो डोज याद गरेपछि लिनुहोस् र त्यसपछि सामान्य दिन अर्को दिनमा पुनः सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईंले २ 24 घण्टा भन्दा बढि लिन बिर्सनुभयो भने, सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईंकोस्वास्थ्य सेवानिर्देशनहरूको लागि प्रदायक वा फार्मासिष्ट।
लिनु कहिले पनि रोक्नु महत्त्वपूर्ण छXareltoडाक्टरको अनुमति बिना।Xareltoयदि अचानक रोकियो भने जटिलताहरू निम्त्याउँन सक्छ, त्यसैले डाक्टरहरूले दुबै दुधलाई बिरामीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्दछ
त्यहाँ रोके पछि केही फिर्ती लक्षणहरू हुन सक्छXarelto। लक्षण १२ देखि २ hours घण्टा भित्र देखा पर्न सक्छ तर एक हप्ता भित्रमा रोकिन्छ। बाट फिर्ता लक्षणहरूXareltoसमावेश गर्न सक्नुहुन्छ:
चक्कर आउने र मतली
यो अधिक मात्रामा संभव छXarelto, र परिणाम घातक हुन सक्छ। यदि एक बिरामीले अधिक इन्जेट्स गर्दछrivaroxabanनिर्धारित भन्दा, तिनीहरू अत्यधिक रक्तस्रावको विकास गर्न सक्छन्। यो सम्भावित घातक जटिलता हो।
Xareltoऔषधि भण्डारण गर्नका लागि विशेष निर्देशनहरूको साथ आउँदैन। बिरामीहरूले गोली लिने ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्दछकोठाको तापक्रमर नमी र उच्च गर्मीबाट टाढा। औषधि पनि साना बच्चाहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्दछ, साथै दुर्घटनात्मक अत्यधिक इनजेशनबाट बच्न अन्य औषधीहरू (प्राथमिकता आफ्नै बोतलमा) अलग गर्नुपर्दछ।
महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारीको लागि तल हेर्नुहोस्Xarelto।
Xareltoकेवल ती व्यक्तिहरू द्वारा लिनु पर्छ जसलाई कम गर्नु आवश्यक छरगत कोटएक हृदय वा जोखिमबाटरक्त वाहिनीअवस्था
जबकि त्यहाँ पर्याप्त क्लिनिकल अध्ययन सन्दर्भ छैन Xareltoगर्भवती महिला द्वारा प्रयोग , यसले भ्रुण र आमामा रगत बग्न सक्छ। बिरामीहरू जो गर्भवती छन् वा गर्भवती हुन योजना बनाउँदछन् उनीहरूसँग कुरा गर्नस्वास्थ्य सेवासुरु गर्नु अघि व्यावसायिकXarelto र सम्भावना यस जनसंख्या मा अधिक जानकारीको साथ वैकल्पिक aantoagulants निर्धारित हुनेछ।स्तन पानयो लिँदा सुरक्षित पनि नहुन सक्छanticoagulant।
चिसो हुँदा के खाना खाने
त्यहाँ दुई महत्वपूर्ण चेतावनी को उपयोग वरपर छन्Xarelto।
औषधीको चाँडै प्रयोग रोक्नाले गम्भीर जोखिम बढाउन सक्छरगत कोट।
को एफडीए त्यो पनि चेतावनी दिन्छएपिडुरलर मेरुदण्डमा हेमेटोमास लागेका बिरामीहरूमा देखा परेको छXareltoएक गरीरहेको बेलामेरुदण्ड पंचरर neuraxial एनेस्थेसिया प्राप्त गर्दै। परिणाम स्थायी पक्षाघात हुन सक्छ।
यदि तपाईं शल्य चिकित्साको लागि निर्धारित हुनुहुन्छ भने, लिन रोक्नुहोस्Xareltoकम्तिमा दुई वा तीन दिनसम्म प्रमुख प्रक्रियाहरू अघि र एक दिन सानो प्रक्रिया अघि। बिरामीहरूले शल्यक्रिया पछि औषधि पुनःसुरु गर्न सक्दछन्। IV इन्फ्यूजनको रूपमा उपलब्ध Xarelto को कारण जीवन-जोखिमपूर्ण रक्तस्रावको लागि एक उल्टो एजेन्ट छ, जुन मानक सहायक उपायहरूको साथ संयोजनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मा मार्च २०१ settlement बन्दोबस्त जॉनसन र जोनसन र बायर बीच,Xareltoप्रयोगकर्ताहरूले २ 25,००० भन्दा बढी मुद्दा चलाए। सूटले दावी गरे कि निर्माताहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई चेतावनी दिएननगम्भीर दुष्प्रभाव, अनियंत्रित रक्तस्राव र रक्तस्राव सहित। गम्भीरसाइड इफेक्टअब औषधीको चेतावनी लेबलमा सूचीबद्ध छन्।
को लागी तपाईको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्चिकित्सा सल्लाहयदि तपाईं एक अनुभवएलर्जी प्रतिक्रियालाईXarelto। लक्षणहरूमा पित्ती, सास फेर्न गाह्रो, र कान, नाक, र घाँटी क्षेत्रमा सूजन समावेश छ।
यी सबै भन्दा साधारण होसाइड इफेक्टप्रयोग गरेरXarelto:
यदी कुनै गम्भीर छ भनेसाइड इफेक्टदेखा पर्छ, तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:
गम्भीर र अनियंत्रित रक्तस्राव
पुराना वा खुजली
टाउको दुखाइ र चक्कर
घाउहरूको वरिपरि पीडा वा सूजन
मेरुदण्डका लक्षणहरूरगत कोट(पछाडि दुखाई / सुन्न, मूत्राशय नियन्त्रण को गुमाउनु)
त्यहाँ प्रयोग गर्दा कुनै आहार प्रतिबन्धहरू आवश्यक छैनXareltoताकि तपाईं सामान्य रूपमा आफ्नो आहार जारी राख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि रक्सी पिउँदाXarelto तपाईंको बढाउन सक्छरक्तस्रावको जोखिम। रक्सी पिउँदा रगत पातलो हुन्छ। यसको शीर्षमा, कलेजोको मेटाबोलिक परिवर्तनहरूले गर्दा पिउँदा पनि परिवर्तन हुन सक्छXarelto'प्रभावकारिता।
उपचारको क्रममा रक्सीबाट अलग रहन सिफारिस गरिन्छथप्पडसंग जोखिमरगत पातलो।
रगत पातलो पार्ने औषधीसँग केहि सम्भावित औषधि अन्तर्क्रियाहरू छन्।
एन्टिकोआगुलेन्टहरू र Xarelto : अर्को रगत पातलो औषधी लिएरXareltoअनियंत्रित रक्तस्रावको तपाईंको जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ।
एस्पिरिन र Xarelto : जब सम्म तपाईंको डाक्टरले यो सिफारिस गर्दैन, एस्प्रिन नखोज्नुहोस्Xarelto। एस्पिरिनले रगत पातलो पार्छ, जसले उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्दछरक्तस्रावको जोखिमजब जोडियोXarelto। यद्यपि डाक्टरहरूले कम डोजको साथ एस्पिरिन विधि कम मात्रामा लेख्न सक्छन्Xarelto।
Xareltoरगत पातलो पार्ने विभिन्न औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। यदि तपाइँको डाक्टर लेख्न चाहान्छXarelto, यदि तपाईंले तलका कुनै औषधि लिनुभयो भने उनीहरूलाई सूचित गर्नु आवश्यक छ, किनकि यसले गम्भीर कुराकानीको कारण हुन सक्छ:
तपाईले के लिनु हुँदैनXarelto?
प्राय: दुखाइ कम गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् वाNonsteroidal विरोधी भड़काउने औषधि(NSAIDs), एस्पिरिन सहित,नेप्रोक्सेन, Excedrin, रआइबुप्रोफेन। यदि तपाईंलाई एक दुखाइ-निवारण गर्ने औषधि आवश्यक छ भने, एसिटामिनोफेन (टायलनोल) सँग ज्ञात अन्तर्क्रिया छैन।Xarelto।
Pepto-Bismol साथ बेवास्ता गर्नुहोस्Xarelto, यसले पनि बढाउन सक्छरक्तस्रावको जोखिम। केहि ईर्ष्यालु औषधीहरू पनि ईन्जेस्ट गर्न सुरक्षित हुँदैनXarelto, cimetidine सहित। यद्यपि, निम्न ईर्ष्या र एसिड भाटा औषधीहरू सुरक्षित छन्:
Famotidine (टम्स, पेप्सीड)
बजारमा रगत पातलो पार्ने औषधीहरू छन्, र तपाईंकोस्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूले उनीहरूलाई कुन तपाईंको लागि उत्तम हो भन्ने सल्लाह दिनेछ।
इलिक्विस बनाम Xarelto : प्रत्येक औषधीको उत्पादन रोक्न उस्तै तरीकाले कार्य गर्दछरगत जमाउनेएजेन्टहरू। एलिकिसको जेनेरिक नाम होapixaban, र मानक खुराक भन्दा कम छXarelto। अध्ययनले सुझाव दिन्छ कि एलिकिस बिरामीको भरमा सुरक्षित हुन सक्छ।
वारफेरिन बनाम Xarelto : वारफेरिनप्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ यदि तपाईं एक खुराक याद गर्नुभयो भने, जबकि एक खुराक हराइरहेको छXareltoजटिलता पैदा गर्न सक्छ। ओभरडोजको अवस्थामा त्यहाँ सजिलैसँग सजीलो उल्टो एजेन्ट पनि छ, कुनै पनि एन्टिकोआगुलेन्टको साँचो उल्टोले उनीहरूको आफ्नै अनौंठो चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ। को Dosingwarfarinएक नाजुक खुराक सन्तुलन आवश्यक छ, त्यसैले नियमित रगत स्तर जाँच आवश्यक छ।
इलिक्विस रXareltoदुबै का आधा जीवन छोटो छ, मतलब औषधि को प्रभावहरु चाँडै बन्द बन्द।वारफेरिन(Coumadin) लामो समय सम्म रहन्छ, त्यसैले एछुटेको खुराककम गम्भीर छ, यस अर्थमा यसलाई थोरै सुरक्षित बनाउँदै।
यद्यपिwarfarinतपाईको कती चाँडो हेर्नका लागि नियमित जाँचहरूको आवश्यक पर्दछरगत थप्नेयो निश्चित गर्नका लागि कि तपाई सही डोज पाउँदै हुनुहुन्छ। आहार परिवर्तन जसले शरीरमा भिटामिन के बढाउँदछ वा घटाउँछ पनि तपाईंलाई आवश्यक पर्ने खुराकलाई असर गर्न सक्छ। केहि असंख्य औषधि र पूरक अन्तर्क्रियाwarfarin। यो अवस्था मा,Xareltoर एलीक्विस प्रयोग गर्न सुरक्षित छन्।
प्रत्येक रगत पातलो पार्ने औषधि डाक्टरले तोक्ने तरिका प्रयोग गर्न सुरक्षित छ। यदि तपाइँ बिभिन्न औषधिमा स्विच गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईका साथ प्रत्येकको फाइदाहरु र बेफाइदाहरु बारे छलफल गर्नुहोस्स्वास्थ्य सेवाप्रदायक
कसरी बचत गर्नेXarelto
Xarelto‘औसत रिटेल मूल्य $ 33.०7 हो र प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले लागतलाई समेट्छन्। धेरै बिरामीहरू प्रत्येक महिना शून्य र $ 40 बीचमा भुक्तान गर्न समाप्त हुनेछ।
यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईं Janssen CarePath बचत कार्यक्रमको साथ लागतमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बिरामीहरूले प्रति १० डलर तिर्छन्Xareltoभर्न। त्यहाँ योग्य हुन धेरै आवश्यकताहरू छन्, प्रत्येक क्यालेन्डरमा अधिकतम लाभ, र मेडिकेयर बिरामीहरूले यो प्रस्ताव प्राप्त गर्न सक्षम छैनन्।
Janssen चयन अर्को निर्माता प्रोग्राम हो जुन तपाईंलाई बचत गर्न मद्दत गर्दछXarelto। यदि तपाईं प्रत्येक बोतल भर्न $ than। भन्दा बढी तिर्ने हुनुहुन्छ भने, तपाईं योग्य हुन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम बिरामीहरूका लागि लक्षित छ जसले उच्च कटौतीयोग्य बिमा नाकाबन्दीको कारण औषधि लिन सक्दैनन्। उनीहरूको बचत कार्यक्रमको बारेमा अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
एकलकेयर पनि प्रदान गर्दछ बचत कुपनहरू को लागीXareltoदेशव्यापी भाग लिने फार्मेसीहरूमा।
Bumex vs. Lasix: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
कहिले सम्म zoloft चिन्ता को लागी काम गर्दछ
गर्भावस्था को रोकथाम को लागी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली कती प्रभावकारी छ?
के तपाइँ एक नेबुलाइजर को लागी एक नुस्खा छ
तपाइँको रोटी र क्रिएटिनिन स्तर कसरी कम गर्ने
कति समय यो पर्ची pepcid काम गर्न को लागी लिन्छ